​သံ​လွင်​မြစ်​အ​ပေါ်​ရေ​ကာ​တာ​များ​တည်​ဆောက်​ခွင့်​ကို​ရုပ်​သိမ်း​ပေး​ရန်​ဒေါ်​အောင်​ဆန်း​စု​ကြည်​ထံ​သို့​အိတ်​ဖွင့်​စာ - ရှမ်းလူ့အခွင့်အရေးမဏ္ဍိုင် (SHRF)
ရက်​စွဲ – ​ဩ​ဂုတ်​လ ၁၇ ​ရက် ၂၀၁၆ ​ခု​နစ်။
​သံ​လွင်​မြစ်​အ​ပေါ်​ရေ​အား​လျှပ်​စစ်​စီ​မံ​ကိန်း​ဆက်​လက်​လုပ်​ဆောင်​ရန်​အ​တွက် ​ဩ​ဂုတ်​လ ၁၂ ​ရက်​တွင် ​မြန်​မာ့​လျှပ်​စစ်​ဓာတ်​အား​လို​အပ်​ချက်​ကိုု ​ဖြည့်​တင်း​ပေး​ရန်​အ​ကောင်း​ဆုံး​နည်း​လမ်း ​ဖြစ်​လိမ့်​မည်​ဟု​ဆို​သည့် ​အ​ပေါ် ​ကျွန်ုပ်​တို့​နှင့်​လွန်​စွာ​ပက်​သက်​နေ​သော​ကြောင့်​စိတ်​ပူ​ပြီး​ခု​လို​စာ​ရေး​လိုက်​ခြင်း​ဖြစ်​သည်။
​သံ​လွင်​မြစ်​သည်​မြန်​မာ​နို်င်​ငံ​၏ ​အ​ရှေ့​ဘက်​ခြမ်း​ရှိ​တိုင်း​ရင်း​သား​တို့​၏ ​လူ​ဦး​ရေ​သန်း​ပေါင်း​များ​စွာ​အ​တွက် ​အ​လွန်​အ​ရေး​ပါ​သော​မြစ်​ကြောင်း​တစ်​ကြောင်း​ဖြစ်​သည်။ ​ရေ​စီး​ဆင်း​နုံး​အား​ကောင်း​နေ​သော ​မြစ်​ရေ​ကို​ပိတ်​ဆို့ ​ပါ​က ​ပြန်​ပြင်​မ​ရ​သည့်​ထိ​ခိုက်​မှု​ဆိုး​ကျိုး​များ​မှာ ​ထိုင်း​နိ်ုင်​ငံ​နှင့်​တ​ရုတ်​နိုင်​ငံ​အ​ပါ​အ​ဝင်​ဖြစ်​သည်။ ​ထို့​ကြောင့် ​မြစ်​ကြောင်း​တ​လျှောက်​နေ​ထိုင်​ကြ​သော ​မွန်​ပြည်​နယ်၊​က​ရင်​ပြည်​နယ်၊​က​ရင်​နီ ၊​ရှမ်း ​ပြည်​နယ်​ရှိ​လူ​ထု​များ​နှင့် ​မြန်​မာ​ပြည်​တ​ခြား​အ​ပိုင်း​နှင့်​အိမ်​နီး​ချင်း​နိုင်​ငံ​များ​မှ​လူ​ထု​များ​သည် ​သံ​လွင်​မြစ်​ပေါ် ​ရေ​ကာ​တာ​များ​တည်​ဆောက် ​မှု​နှင့်​ပတ်​သက်​ပြီး​အ​ခိုင်​အ​မာ​ဆန့်​ကျင်​ကန့်​ကွက်​ကြ​သည်။
​နိုင်​ငံ​တော်​အ​တိုင်​ပင်​ခံ​ပု​ဂိ္ဂုလ်​ကို ​အ​ကြံ​ပေး​လို​သည်​မှာ ​သံ​လွင်​မြစ်​ကြောင်း​တ​လျှောက်​သည်​လွန်​ခဲ့​သော ​ဆယ်​စု​နစ်​က​တည်း​က ​ပ​ဋိ​ပ​က္ခ​ဖြစ်​ရာ​ဒေ​သ​ဖြစ်​သည်။ ​တိုင်း​ရင်း​သား​နယ်​မြေ​အ​တွင်း​ရှိ​သ​ဘာ​ဝ​သ​ယံ​ဇာ​တ
​များ​နှင့် ​နယ်​မြေ​ထိန်း​ချူပ်​ရေး​အ​တွက် ​အ​စိုး​ရ​စစ်​တပ်​မှ​စ​နစ်​တ​ကျ ​အ​စီ​စဉ်​ချ​မှတ်​ပြီး​စစ်​အင်​အား​တိုး​ချဲ့​ကာ ​နယ်​မြေ​ရှင်း​လင်း​ခဲ့​သည်။ ​အ​စိုး​ရ​စစ်​တပ်​စစ်​အင်​အား​တိုး​ချဲ့​မှု​အ​တူ ​အ​ဘက်​ဘက်​မှ​စစ်​ကြောင်း​များ​ကြောင့် ​ပ​ဋိိ​ပ​က္ခ ​ပို​မို​ဖြစ်​စေ​သည့်​အ​ပြင် ​ပြည်​သူ​လူ​ထု​များ​အား ​နှိပ်​စက်​ညှင်း​ပန်း​မှု​များ ​ဆက်​လက်​ဖြစ်​ပွား​စေ​ပါ​မည်။
​ဖက်​ဒ​ရယ်​စ​နစ်​ကို​နိုင်​ငံ​ရေး​စား​ပွဲ​ဝို်င်း​မ​ရောက်​မှီ​စ​တင်​နေ​မည့် ​သံ​လွင်​ရေ​ကာ​တာ ​တည်​ဆောက်​ခွင့်​ပြု​လိုက် ​ခြင်း​သည်​တစ်​ဖက်​သတ်​ဆုံး​ဖြတ်​လိုက်​သည့်​အ​တွက် ​ခေတ်​အ​ဆက်​ဆက်​နေ​ထိုင်​လာ​သော​တိုင်း​ရင်း​သား ​လူ​မျိုး​များ​၏​နယ်​မြေ​တွင်း​ရှိ​သံ​ယံ​ဇာ​တ​များ​ကိုယ်​ပိုင်​ဆုံး​ဖြတ်​ခွင့် ​မ​ပါ​ရှိ​သော​ကြောင့် ​ငြိမ်း​ချမ်း​ရေး​လုပ်​ငန်း​စဉ် ​အ​ပေါ်​လည်း​ယုံ​ကြည်​မှု​အား​နည်း​လာ​မည်။ ၂၁ ​ပင်​လုံ​ညီ​လာ​ခံ​ကို​ကျင်း​ပ​ရန်​နှစ်​ပတ်​ခန့်​အ​လို​တွင် ​ဤ​သံ​လွင်​မြစ် ​ရေ​ကာ​ထာ​စီ​မံ​ကိန်း​များ​ကို​ခွင့်​ပြု​လိုက် ​မည်​ဆို​ပါ​က ​များ​စွာ​စိုး​ရိမ်​ပူ​ပန်​မှု​ကို​ဖြစ်​စေ​ပါ​သည်။
​ကျွ​နု်ပ်​တို့​အ​ကြံ​ပြု​လို​သည်​မှာ ​ဤ​ရေ​ကာ​တာ​များ​ကို​တည်​ဆောက်​ရာ​တွင် ​မြန်​မာ​နိုင်​ငံ​အ​တွက်​လို​အပ်​သော ​လျှပ်​စစ်​မီး​တည်​ဆောက်​ပေး​သည်​ဟု​ဆို​ရာ​တွင် ​ကြီး​မား​စွာ​လွဲ​မှား​နေ​ပါ​သည်။ ​ဥ​ပ​မာ​အား​ဖြင့် ​ရှမ်း​ပြည်​နယ် ​မြောက်​ပိုင်း​ရှိ ​သံ​လွင်​မြစ်​အ​ပေါ်​ကွန်​လုံ​ရေ​ကာ​တာ​က​နေ​ထွက်​သော၁၄၀၀​မ​ဂ္ဂါ​ဝပ်​နှင့် ​နောင်​ဖာ​ရေ​ကာ​တာ​မှ ​ထွက်​သော ၁၂၀၀ ​မ​ဂ္ဂါ​ဝပ်​လျှပ်​စစ်​ဓါတ်​အား ၉၀% (​ရာ​ခိုင်​နှုန်း) ​ခန့်​သည်​တ​ရုတ်​နိုင်​ငံ​သို့​သွား​မည်​ဖြစ်​ပြီး ​မြန်​မာ​နိုင်​ငံ​တွင် ​ထို​ဒေ​သ​ရှိ​တိုင်း​ရင်း​သား​များ ​အ​တွက်​ကြီး​မား​သော ​ဒု​က္ခ​ကို​ခံ​စား​ရ​ပေ ​တော့​မည်။
​အ​မျိုး​သား​ပြန်​လည်​သင့်​မြတ်​ရေး​နှင့် ​သ​ဘာ​ဝ​ပတ်​ဝန်း​ကျင်​နှင့်​သ​ယံ​ဇာ​တ​ရေ​ရှည်​တည်​တန့်​ခိုင်​မြဲ​ရေး​အ​တွက် ​ကျွန်ုပ်​တို့​လေး​နက်​စွာ ​တိုက်​တွန််း​လို​သည်​မှာ ​သံ​လွင်​မြစ်​အ​ပေါ်​ရေ​ကာ​တာ​တည်​ဆောက်​မည့်​အ​စီ​စဉ်​များ ​အား​လုံး​ကို​ချက်​ချင်း​ပြန်​လည်​ရုတ်​သိမ်း​ရန်​တောင်း​ဆို​သည်။ ​တိုင်း​ရင်း​သား​များ​အား​လုံး​တန်း​တူ​ညီ​မျှ​မှု​နှင့်​အ​တူ ​ဖက်​ဒ​ရယ်​မူ​ဝါ​ဒ​ချ​မှတ်​နိုင်​မှ​သာ ​မြန်​မာ​နိုင်​ငံ​ပြည်​တွင်း​စစ်​သည်​ရပ်​တန့်​နိုင်​မည်​ဖြစ်​ပြီး​ကျွန်ုပ်​တို့​အိမ်​နီး​ချင်း​နိုင်​ငံ ​များ ​က​လည်း​ငြိမ်း​ချမ်း​ရေး​အ​တွက်​လှိုက်​လှဲ​စွာ​အား​ပေး​ကြ​ပေ​လိမ့်​မည်။
1. Action for Shan State Rivers
2. Shan State Farmers’ Network
3. Shan Farmers’ Network
4. Shan Sapawa Environmental Organization
5. Shan Human Rights Foundation
6. Shan Women’s Action Network
7. Shan Students Union-Thailand
8. Shan Youth Power
9. Shan Youth Organization (Taunggyi)
10. Shan Youth Network Group
11. Kaw Dai
12. Workers’ Solidarity Association
13. Zao Khur Tai
14. Nong Zarng Customary Land Committee
15. Toom Toan Tai
16. Shan Relief and Development Committee
17. Community Action for Development Education (Shan State)
18. Mong Pan Youth Committee
19. Koong Jor Refugee Camp Committee
20. Wan Paing Fah IDPs Camp Committee
21. Laikha Youth Association
22. Capacity Building for Youth (Laikha)
23. Shan State Women’s Organisation
24. Shan State Youth Network Committee
25. Tai Literature and Culture Association (KarLi)
26. Tai Youth Organization (Karli)
PDF files >>> Shan Burmese English